Esdrasa 8 - Ny Baiboly
Esdrasa toko 8
Ny olona niara-nandeha tamin'i Esdrasa: tantaran'ny dian'izy ireo.
1Izao no loham-pianakaviana sy filazana ny firazanany, dia ireo niara-niakatra tamiko avy any Babilona, tamin'ny andro nanjakan'i Artakserksesa mpanjaka. 2Tamin'ny taranak'i Finea, Gersoma; tamin'ny taranak'Itamara, Daniela; tamin'ny taranak'i Davida, Hatosa, 3izay avy amin'ny taranak'i Sekeniasa; tamin'ny taranak'i Farosa, Zakaria, mbamin'ireo dimampolo amby zato lahy, voasoratra ao amin'ny bokim-pianakaviana izay niaraka taminy. 4Tamin'ny taranak'i Falata-Moaba, Elioenaì, zanak'i Zarehiasa mbamin'ireo roan-jato lahy izay niaraka taminy; 5tamin'ny taranak'i Sekeniasa, taranak'i Ezekiela, mbamin'ireo telon-jato lahy izay niaraka taminy; 6tamin'ny taranak'i Adàna, Abeda zanak'i Jonatàna, mbamin'ireo dimampolo lahy izay niaraka taminy; 7tamin'ny taranak'i Alama, Izaia, zanak'i Ataliasa mbamin'ireo enimpolo lahy izay niaraka taminy; 8tamin'ny taranak'i Safatiasa, Zebediasa zanak'i Mikaela, mbamin'ireo valopolo lahy izay niaraka taminy; 9tamin'ny taranak'i Joaba, Abediasa zanak'i Jehiela mbamin'ireo valo ambin'ny folo amby zato lahy izay niaraka taminy; 10tamin'ny taranak'i Selomita, zanak'i Josefiasa mbamin'ireo enimpolo amby zato lahy izay niaraka taminy; 11tamin'ny taranak'i Bebaì, Zakaria zanak'i Bebaì mbamin'ireo valo amby roapolo lahy izay niaraka taminy; 12tamin'ny taranak'i Azgada, Johanàna zanak'i Eksetana mbamin'ireo folo amby zato lahy niaraka taminy; 13tamin'ny taranak'i Adonikama, dia farany ireo, ka izao no anarany: Elifeleta, Jehiela, ary Semaiasa, mbamin'ireo enimpolo lahy niaraka taminy; 14tamin'ny taranak'i Begoaì, Otaì sy Zakora, mbamin'ireo fitopolo lahy niaraka taminy.
15Novoriko teo amoron'ny ony mankany Ahavà izy ireo, dia nilasy teo hateloana izahay. Nony nandinika ity vahoaka mbamin'ireo mpisorona aho, dia tsy nahita ny taranak'i Levì teo na dia iray aza. 16Dia nasaiko nantsoina ny loholona, Eliezera, Ariela, Semeiasa, Elnatàna, Jariba; Elnatàna anankiray, Natàna, Zakaria ary Mosolama, mbamin'ireo mpampianatra: Joiariba sy Elnatàna. 17Nirahiko ho any amin'i Edao loholona, ao amin'ny fitoerana atao hoe Kasfià izy ireo; dia nofahanako teny hambara amin'i Edao, mbamin'ireo Natineana rahalahiny any amin'ny fitoerana atao hoe Kasfià izy, mba hitondrany mankaty aminay izay ho mpandraharaha ao amin'ny tranon'Andriamanitray 18Ary satria nomba anay ny tanàna manambin'Andriamanitray, dia nentin'izy ireo nankaty aminay, ity lehilahy manan-tsaina anankiray avy amin'ny taranak'i Moholì, zanak'i Levì, zanak'Israely, dia Sarabiasa mbamin'ireo zanany aman-drahalahiny valo ambin'ny folo lahy; 19Hasabiasa ary Izaia koa miaraka aminy, avy amin'ny taranak'i Merarì, mbamin'ireo rahalahiny sy zanany roapolo lahy; 20ary ny avy amin'ny Natineana izay nomen'i Davida sy ny loholona hanompo ny levita, Natineana roapolo sy roan-jato samy voatendry amin'ny anarany.
21Niantso andro fifadian-kanina aho, teo amoron'ny ony Ahavà teo, hampijalianay tena eo anatrehan'Andriamanitray, hangatahanay aminy mba ho tsara mandroso avokoa, na ny tenanay, na ny zanakay, na ny anananay rehetra. 22Fa nahamenatra ahy ny hangataka miaramila manatitra amam-pitaingin-tsoavaly, tamin'ny mpanjaka, hiaro anay amin'ny fahavalo eny an-dàlana, noho izahay efa niteny tamin'ny mpanjaka nanao hoe: Momba an'izay rehetra mitady azy ny tànan'Andriamanitra, hahasoa azy ireo, fa mahatratra an'izay rehetra mahafoy azy kosa ny heriny sy ny fahatezerany. 23Noho izany nifady hanina izahay sy nangataka tamin'Andriamanitray, ary nihaino anay izy.
24Dia nifidy lohan'ny mpisorona roa ambin'ny folo lahy aho; dia Sarabiasa sy Hasabiasa, mbamin'ny folo lahy tamin'ireo rahalahiny; 25ka nolanjaiko teo anatrehan'izy ireo, ny volafotsy, ny volamena sy ny fanaka, zavatra naterin'ny mpanjaka sy ny mpanolo-tsainy aman-dehibe ary ny olon-drehetra amin'Israely vory teo, natokany ho an'ny tranon'Andriamanitra, 26dia nolanjaiko sady nataoko eo an-tànany, talenta volafotsy dimampolo sy enin-jato, fanaka volafotsy lanjan-talenta zato, talenta volamena zato; 27kopy volamena roapolo, lanjan-darìka arivo; ary kapoaka varahina manganohano roa, sarobidy toy ny volamena. 28Ary izao no nolazaiko tamin'izy ireo: Masina eo anatrehan'ny Tompo hianareo, ary ireo fanaka ireo dia zavatra masina; izany volafotsy amana volamena izany, dia fanatitra an-tsitra-po ho an'ny Tompo, Andriamanitry ny razanareo. 29Koa ambeno amim-pitandremana ireo, mandra-pandanjanareo azy eo anatrehan'ny lohan'ny mpisorona sy ny levita, sy eo anatrehan'ny loham-pianakavian'Israely, any Jerosalema, amin'ny efi-trano eo an-tranon'ny Tompo. 30Dia noraisin'ireo mpisorona sy levita ny volafotsy amana volamena sy fanaka araka ny lanjany, hoentina ho any Jerosalema, ao an-tranon'Andriamanitsika.
31Niala teo amin'ny ony Ahavà, tamin'ny andro faharoa ambin'ny folon'ny volana voalohany izahay, ho any Jerosalema. Nomba anay ny tànan'Andriamanitray, ka namonjy anay tamin'ny tànan'ny fahavalo sy ny mpanotrika teny an-dàlana. 32Nony tonga tany Jerosalema izahay, dia niala sasatra hateloana.
33Tamin'ny andro fahaefatra dia nolanjaina tao an-tranon'Andriamanitray ny volafotsy sy volamena mbamin'ny fanaka, ho eo an-tànan'i Merimota, zanak'i Oria, mpisorona; teo aminy koa Eleazara, zanak'i Finea; ary teo amin'izy ireo koa, Jozabada zanak'i Josoe, sy Noadiasa zanak'i Benoì. 34Dia araka ny isany aman-danjany avokoa izy, ka nalatsaka an-tsoratra tamin'izany andro izany ny tontalin'ny lanjany.
35Ary nanatitra sorona dorana ho an'Andriamanitr'Israely ny olona avy any amin'ny tany nahavoasesi-tany azy, dia ny zanaky ny fahababoana, ombalahy roa ambin'ny folo ho an'Israely rehetra, ondralahy enina amby sivifolo, zanak'ondry fito amby fitopolo, osilahy roa ambin'ny folo, noho ny ota: natao sorona dorana ho an'ny Tompo izany rehetra izany. 36Dia natolotr'izy ireo ny governora lehiben'ny mpanjaka mbamin'ny governora any an-dafin'ny ony, ny didin'ny mpanjaka, ka dia niaro ny vahoaka sy ny tranon'Andriamanitra ireo. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 1.9792 seconds